तपाई गिजर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् ।
काठमाण्डौ, कात्तिक । प्रविधिको विकासले छलाङ्ग मारेसँगै मानिसहरुको इच्छा र आवश्यकताहरुमा पनि परिवर्तन आएको छ । मानिसहरुले मौसम अनुसारको सामानहरुको प्रयोग गर्दछन् । अहिले चिसो बढिसकेको छ । जाडोलाई भग...
काठमाडौं,कात्तिक  । विगत लामो समय देखि गुणस्तरीय विद्युतीय केबुलहरुको उत्पादन गरी नेपाली बजारमा आफ्नो उच्च पहिचान बनाउन सफल प्राइम केबल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि ले आफ्ना FLAMEGARD FRLS-H केबुल तार बिक्र...
उड्ने कार निर्माण
१२ वर्षको निरन्तर प्रयासपछि विश्वकै पहिलो उड्ने कार वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरुले निर्माण गरेका छन् । यसको विक्री सुरु गर्ने तर्खर गरिँदैछ । कार निर्माता कम्पनिले अमेरिकाबाट अर्को महिनादेखि यस...
घर बाहिरका गतिविधि निगरानीमा राख्ने जियोमेट उपकरण बजारमा
इटहरी, भदौ । जियोमेट ट्रयाकिङ प्रणाली द्वारा सवारीसाधन र मानिसको गतिविधि सम्बन्धी यथार्थ जानकारी दिने उपकरण टेलिमेट्रिक्स टेक प्राइभेट लिमिटेडले बजारमा ल्याएको छ । शहरीकरणसँगै मानिसको जीवन व्यस्त ब...
आइमार्स ब्रान्डका मोबाइल नेपाली बजारमा आउँदै
काठमाण्डौ, भदौ । आइमार्स नामक मोबाइल ब्रान्ड नेपाल भित्रिने भएको छ । अबको केही सातामा ओपल मल्टिनेसनल प्रालिले नयाँ चिनियाँ ब्रान्डका स्मार्टफोन नेपाली बजारमा ल्याउने भएको हो । आफ्ना उत्पादन बजारमा...
युनिलाईफ ब्राण्डका रङगीन स्वीच नेपाली बजारमा
प्रदिप श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ । युनिलाईट इन्टरनेशनल प्रा.लि ले तपाईको विश्वास हाम्रो पहिचान भन्ने मुल नाराका साथ रङ्गीन स्वीचहरू नेपाली बजारमा ल्याएको छ । गत शनिबार धुलिखेल रिसोर्टमा कार्यक्रमको आ...
सामसंग ग्यालेक्सी नोट नाइन सार्वजनिक ५१२ जीबी आन्तरिक स्टोरेज
काठमाडौं । सामसंगले आफ्नो नयाँ ल्यागशिप स्मार्टफोन ग्यालेक्सी नोट नाइन (न्बबिहथ ल्यतभ ढ) यहि अगस्ट ९ तारिख विहिबार सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले न्यूयोर्कको बार्क्लेज सेन्टरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमम...
रोमा अरबन स्वीच नेपाली बजारमा
भीमलाल श्रेष्ठ काठमाडौं, साउन । प्रिमियर ओभरसिज प्रा.लि ले शनिबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै रोमा कम्पनीको मोडुलर स्वीज अरबन स्वीच नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ । विगत १०० वर्ष देखि पानास...
अटोमेटिक ट्रान्सफर स्विच बजारमा
पछिल्लो टेक्नोलोजीबाट निर्मित अटोमेटिक टान्सफर स्विच बजारमा आएको छ । आकर्षक अति उपयोगी टान्सफर स्विच एच पिएल कम्पनीले उत्पादन गरेको हो । नेपाली बजारमा भर्खरै आएको उक्त स्विच निक...
बजारमा युएफ ओ ल्याम्प
उपभोक्ताको माग लाई ध्यानमा राखेर बनाइएको निकै आकर्षक एइडी बत्ति बजारमा आएको छ । नियमित आइरहेको एइडी ल्याम्प भन्दा निकै आकर्षक डिजाइन प्रयोग गर्न सहज सरल उक्त युएफ ओ ल्याम्प राजधानी ब्राण्डले नेपालम...
ग्राहकको रोजाइ क्रम्टनको “गिजर”
जाडो महिना शुरु भए पछि मानिसहरु बढि गिजर सम्झिन्छन् । विशेषतः पानी तताउन प्रयोग गरिने गिजर ब्राण्ड मुल्य र गुणस्तरियताका कारण महत्व रहेको हुन्छ । किन्दा आफुले कुन ब्राण्ड र क्यापासिटीको किन्दैछु भन...
लोक प्रिय बन्दै राजधानी ग्यास गिजर
पछिल्लो समय नेपाली बजारमा राजधानी ग्यास गिजरको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । ग्राहकहरुको रुचि बढ्दै गएको कम्पनीले दावी गरेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा विक्रि दर बढ्दै ग्राहकहरुमा चासो बढ्दै गएक...
यसो गर्नुहोस् । ल्यापटपको ब्याट्री धेरै टिक्छ
तपाइँ कुनै जरुरी बैठक वा बाटो वा कक्षाकोठामा हुनुहुन्छ। महत्वपूर्ण काम छ तर ल्यापटपको ब्याट्रीको चार्ज सकिनै लाग्यो। ब्याट्री चार्ज गर्न एडाप्टर पनि ल्याइएको छैन वा एडाप्टर भएपनि चार्ज गर्ने ठाउँ छ...
बिजुलीमा गुड्न सकिन्छ
मलाई बचाउनुस्। म नै भविष्य हुँ। राजधानीको नयाँ बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभागपछाडि थन्किएका थोत्रा ट्रली बसमा लेखिएका शब्द हुन् यी। बिडम्बना! यहाँ निलो अक्षरले लेखिएजस्तो न त ट्रली निरन्तर चल...
तिहार विशेष बत्ति किनमेल बढ्या करिब ७५ करोड रुपैया बराबरको कारोबार हुने
तिहारमा रंगी विरंगी झिलिमिली लाइट, बत्ती जोड्ने प्रचलन नै छ । गाउँ देखि शहरसम्म नेपालीहरुले तिहार मा दिपावली उत्सव मनाउन विभिन्न बत्तिहरुको खरिद गर्ने बाल्ने आम प्रचलन नै हो । नजिकिदो तिहारसँ...